Ever November: 06/16/12
မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းရေး ကူညီပေးဖို့ နိုင်ငံတကာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြောကြား
Ever November | 6/16/2012 10:28:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး Dipu Moni က ဒီကနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ပါလီမန် အစည်းအဝေးမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 10:28:00 PM0comments
တရုတ်ရေငုပ်သင်္ဘော ရေအောက်မီတာ ၆၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိ
Ever November | 6/16/2012 10:13:00 PM | နိုင်ငံတကာသတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 10:13:00 PM0comments
ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ ယူကရိန်း ပွဲစဉ်
Ever November | 6/16/2012 10:11:00 PM | အားကစား
Posted by Ever November at 6/16/2012 10:11:00 PM0comments
အမေစု ဆွစ်ဇာလန် ခရီးစဉ်များ(ရုပ်သံ)
Ever November | 6/16/2012 10:06:00 PM | ရုပ်သံဖိုင်
Posted by Ever November at 6/16/2012 10:06:00 PM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ နော်ဝေနိုင်ငံ ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း..
Ever November | 6/16/2012 09:51:00 PM | ဓာတ်ပုံ
Posted by Ever November at 6/16/2012 09:51:00 PM0comments
Ever November | 6/16/2012 04:24:00 PM | အားကစား
Posted by Ever November at 6/16/2012 04:24:00 PM0comments
တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် Call Center မှ နံပါတ်သစ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးမည်
Ever November | 6/16/2012 04:18:00 PM | နည်းပညာ
Posted by Ever November at 6/16/2012 04:18:00 PM0comments
ရက်နက်ဒ် နုတ်ထွက်သွားတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေသည့် ရွိုင်းဟော့ဆန်
Ever November | 6/16/2012 03:50:00 PM | အားကစား
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:50:00 PM0comments
တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ရပ်ဆိုးသင်ခန်းစာ
Ever November | 6/16/2012 03:44:00 PM | ဆောင်းပါး
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:44:00 PM0comments
ဂတ်တူဆိုကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်သည့် ဂါလာတာ စာရေး အသင်း
Ever November | 6/16/2012 03:40:00 PM | အားကစား
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:40:00 PM0comments
Big Bang အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ စင်္ကာပူတွင် ယခုနှစ် အတွင်း ကျင်းပမည်
Ever November | 6/16/2012 03:33:00 PM | အနုပညာ
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:33:00 PM0comments
Facebook ၏ နည်းပညာ အမှုဆောင်ချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
Ever November | 6/16/2012 03:28:00 PM | နည်းပညာ
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:28:00 PM0comments
ရုပ်သံ စပွန်ဆာမှ အပိုဝင်ငွေ ပေါင် ၁ ဘီလီယံ ရရှိမည့် ပရီးမီးယားလိဂ်
Ever November | 6/16/2012 03:23:00 PM | အားကစား
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:23:00 PM0comments
Ever November | 6/16/2012 03:19:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:19:00 PM0comments
﻿ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ၊ မောင်တောမြို့တို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိပြီး အခြေအနေငြိမ်သက်နေ၊ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ လူဦးရေ သောင်းချီခိုလှုံလျက်ရှိပြီး အချို့နေရာများ၌ စားနပ်ရိက္ခာခက်အခဲဖြစ်ပေါ်
Ever November | 6/16/2012 03:11:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေမငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသော စစ်တွေမြို့နှင့် မောင်တောမြို့တို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိပြီး အခြေအနေငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:11:00 PM0comments
Ever November | 6/16/2012 03:09:00 PM | နိုင်ငံတကာသတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:09:00 PM0comments
နေပြည်တော်မှ အင်တာနက်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဆိုင်များကိုသာ အားကိုးနေရဆဲ
Ever November | 6/16/2012 03:06:00 PM | နည်းပညာ
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:06:00 PM0comments
ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီကြဖို့ အောက်လွှတ်တော်အမတ် Joseph Crowley တိုက်တွန်း
Ever November | 6/16/2012 03:02:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် ထွက်ပြေး လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်မခံတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ကို တုံ့ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် တစ်ရပ်ကို အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အောက် လွှတ်တော်က မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်တာမှာ ထင်ရှားသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နယူးယောက် ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရက်အမတ် ဂျိုးဇက် ခရော်လီ (Joseph Crowley) က ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 03:02:00 PM0comments
နော်ဝေး၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
Ever November | 6/16/2012 02:58:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
နော်ဝေးမြို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ် Jens Stoltenberg
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:58:00 PM0comments
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များကို ကုလ ကူညီမည်
Ever November | 6/16/2012 02:56:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမှု များကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားရသည့် ဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းများစွားအား ကုလသမဂ္ဂမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:56:00 PM0comments
ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ခြောက်ဘဏ်မှ Debit ကတ်ဝန်ဆောင်မှု စတင်ပေးမည်
Ever November | 6/16/2012 02:54:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လ နောက်ဆုံး ပတ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ခြောက်ဘဏ်မှ Debit ကတ်ဝန်ဆောင်မှု စတင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရပါသည်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:54:00 PM0comments
Heavy rain fall around Sistway cause another problem for refugees
Ever November | 6/16/2012 02:52:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:52:00 PM0comments
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များခံယူခဲ့သော သြ၀ါဒကထာအား နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြ
Ever November | 6/16/2012 02:48:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:48:00 PM0comments
Ever November | 6/16/2012 02:44:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
နော်ဝေနိုင်ငံကိုဇွန်လ၁၅ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး တွေ့ရစဉ်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:44:00 PM0comments
နှစ်သိန်း ဖုန်းများ Ring Tune ထည့်သွင်းနိုင်တော့မည်
Ever November | 6/16/2012 02:39:00 PM | နည်းပညာ
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:39:00 PM0comments
မသီတာထွေးအမှု ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် စီရင်ချက် ချဖွယ်ရှိ
Ever November | 6/16/2012 02:33:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ သပြေချောင်းကျေးရွာမှ မသီတာထွေး အား အဓမ္မပြုကျင့်၍ ပစ္စည်းလုယက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် အမှုအား ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ ဆက်တိုက် စစ်ဆေးနေခဲ့ရာ တနင်္လာနေ့တွင် စီရင်ချက် ချနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:33:00 PM0comments
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ဖြူ-ကူးမင်း သွယ်တန်းနေသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
Ever November | 6/16/2012 02:23:00 PM | မြန်မာ့သတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 02:23:00 PM0comments
Ever November | 6/16/2012 07:03:00 AM | မြန်မာ့သတင်း
Posted by Ever November at 6/16/2012 07:03:00 AM0comments
တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိလာသော အန်တီစုအား ကြိုဆိုနေပုံများ (ရုပ်သံ)
Ever November | 6/16/2012 06:59:00 AM | ရုပ်သံဖိုင်
Posted by Ever November at 6/16/2012 06:59:00 AM0comments
Euro 2012 (6/15/2012) ပွဲစဉ်ရလဒ်များ
Ever November | 6/16/2012 06:51:00 AM | အားကစား
Sweden2:3England
Ukraine0:2France
Ref; Livescore com
Posted by Ever November at 6/16/2012 06:51:00 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းရေး ကူညီပေးဖို...
တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် Call Center မှ နံပါတ်သ...
ရက်နက်ဒ် နုတ်ထွက်သွားတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေသ...
ဂတ်တူဆိုကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်သည့် ဂါလ...
Big Bang အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ စင်္ကာ...
ရုပ်သံ စပွန်ဆာမှ အပိုဝင်ငွေ ပေါင် ၁ ဘီလီယံ ရရှိမည်...
မအူကုန်းရပ်ကွက်သားများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခဲ့သော ဇွန်...
﻿ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ၊ မောင်တောမြို့တို့တွင် မိုး...
နေပြည်တော်မှ အင်တာနက်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဆိုင်များ...
ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီကြဖို့ အောက်လွှတ်တော်အမတ...
နော်ဝေး၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်...
ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ခြောက်ဘဏ်မှ Debi...
Heavy rain fall around Sistway cause another probl...
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များခံယူခဲ့သော သြ၀ါဒကထာအား နိုင်...
နှစ်သိန်း ဖုန်းများ Ring Tune ထည့်သွင်းနိုင်တော့မည...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ဖြူ-ကူးမင်း သွယ်တန်းေ...
တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိလာသော အန်တီစုအား ကြ...